Yintoni Papa Pear Saga?
Papa Pear – amanqanaba 23 – 30
I lokuvala limxinwa yeli candelo luyaqhubeka ukunika efudumeleyo thina ukuze amanqanaba ukuza, wayo Iyamangalisa indlela ube nekhono kwi ngokulawula utata okanye 'tune jo’ ezingaphezu kwama ebhodini omnye ngexesha! PHAMBILI!
Papa Pear Tips for kumanqanaba Nzima
Indlela ukuya kwinqanaba ngalinye Papa Pear iba nefuthe elikhulu impumelelo yakho ultimate okanye ukusilela. Nakuba iinjongo kwinqanaba ngalinye icace eyona ndlela apho ukuhlangabezana ezi njongo zinako uko- kancinci ezifihla kakhulu. Ngamanye amaxesha kukho iingcebiso ezimbalwa, tips and tricks ukuba sinokufunda abo ngeenkani zalwa phambi kwakho!
Yazi xa ku 'atshise’ yaye nini Ukupholisa ukuba sizzle – Elidangazelayo Papa mikhulu, kokuba yokungenelela khadi lamaqhuma iziqhamo ukuba bayeke ifiva yakho papa, ukuba atshise ngokusebenzisa chilis, berry, imbewu & iminqathe ngokukhawuleza yaye kubalulekile zemali up imidumba ertyisi ukuba twa isantya amaqhuma okuluhlaza okuncinane indlela yakho. esazi Kodwa xa ku ngokubonakalayo izikhonkwane ngomlilo xa siyiphephe kuzo zonke iindleko kubalulekile. abakumanqanaba athile ezifana Level 77 okanye 90.
Kwakhona khangela Crush candy umdlalo umxokozelo!
Papa Pear Saga – amanqanaba 16- 22
Wamkelekile Pirates of the Pearibbean! ekugqibile orientation yakho ekudibaneni amageduka elinuka Forest wena kakuhle kwi indlela yakho Papa ekufundeni…kuphela 300 engaqhelekanga ukuya! Ukuze bathi phambi kodwa la manqanaba enhle kubaluleke njengesiseko sokufunda, element ngayinye entsha umdlalo yaziswa kancane amanqanaba nzima ezilandelayo kulucelomngeni akumnandi umsebenzi ezoyisayo nzima ukuba amagqabi wena ucinga kwimiphumo Ukuphoswa yefowuni yakho singene echibini dada…ewe kuhle thina fudula sithethe ngayo! ‘
level 16 kusibeke waya phaya eblowu zize zifake endaweni umsebenzi ndikhanyise ezo emele spunky, nge imiqobo embalwa endleleni kunjalo. nge 90 000 amanqaku okufumana uza kufuneka ngamnye wenu 20 papas! Ndinicebisa ekuqaleni
kwinqanaba eliphakathi papa 111
Nangoku nagokuya (kwaye njalo okwandayo kanye undibetha kathathu) uhlangabezana Papa Pear 'isantya esigingqini'. Le kanti ke ngokukhawuleza ngokukhawuleza kwi ekuqaleni njengoko ngcembe ufumane hang of ephelelisa jo wakho’ speed kunye necala. Kuyavunywa eminye imigangatho nzima ngaphezu kwabanye kodwa oku ngokubanzi kuthetha ukuba andifumananga endleleni eyinyaniso, ukuba ukugqiba iinjongo zakho, ezinye zezi azikho nje ngqo phambili njengoko kubonakala…kwaye ke kukho amanqanaba ezifana 111.
Lo level a ngokwentelekiso ngqo phambili injongo, ubethwa uwe 45 iminqathe ze ukufumana ubuncinane 150 000 amanqaku ..(nceda dont ukukhohlwa ngayo iingongoma, bandithembe akukho nto Iyandikhathaza ngaphezu ekugqibeleni kokuphuma ukuba iikherothi yokugqibela engasoze nokuza omfutshane amanqaku) kodwa kubukeka kulo mzekelo uzikhohlisa nje 111 kunzima! lufuna sisakhono encinane kwaye mhlawumbi a lot of luck!
Zama ukwenza ukudala izikhonkwane zakho lomlilo kuqala
Into yokuqala ekufuneka uyenze ukwenza ezinye izikhonkwane umlilo, khumbula oku kwenziwa Bouncing eliphakathi ukusuka kwelinye icala yeskrini ukuya kwenye, kulo mzekelo kubalulekile ukuba wenze oku kuqala phambi kokuba nobomvu zibhuqiwe. Ngoku kuhle ungenza izikhonkwane ezimbini umlilo ngokuqala adubula ngamandla ngokupheleleyo ephezulu yasekhohlo ngoko shot amandla ngokukhawuleza ngokupheleleyo ekunene phezulu, oku kusebenza kodwa kuphela xa ngamaxesha ekunene yimbi tune jo ezimbini wabetha omnye njengoko ukuwela embindini. Ukudlala jikelele ngocwangciso nale shot lokuvula, ukuze yenze umsebenzi adubule izikhonkwane ezimbini ukuya ekhohlo okanye ekunene. Ndiyakholwa ukuba zehle ubuncinane ezimbini umlilo ebhodini kubalulekile ukuba impumelelo, amaphini ezimbini umlilo sele ebhodini ekuqaleni ezingenakwenzeka kufutshane ukuba wenze ngokwazo kunye nendima ilungileyo umdlalo sandise ubomi papa yakho lomlilo.
Yintoni eyenza lo mgangatho okumangalisayo kukuba nje wesijikelezi-iminqathe phakathi iziqwenga zoqalo. Iminqathe ezimbombeni asezantsi lula ukuba ukubetha ukuba isebenze nesikhonkwane umlilo ukucima umqolo wokuqala namaqunube zonakalisa sibenesithuba iminqathe ukuvula pin sokuqhumisa ngaphakathi. A tip ezisebenzisekayo siyikhumbule xa wabetheka pin ephoswa (i eziluhlaza) nge papa sele ivuthe, le papa ngoko igqabhuke kude ngakumbi ubungakanani ekudaleni indawo umphezulu kude ngakumbi nokwandisa amathuba wokutshisa up ezinye crunchies-orenji!
Filed Under: Papa Pear Saga Tagged With: booster, pin Fire, kwenzeke pin, level 111, Papa Pear
Ukulawula abahlobo Papa Pear wakho Facebook
Izaziso ngaba ngokwenene nto amanye abantu…Ziyatha!
Isimanga eyaneleyo wonke umntu axhamle zomdlalo (Ndiyayazi kulungile?) Enyanisweni kukho abo uthole zazo sibalise xa kumazwe isaziso kwiphepha labo facebook okanye iziphelo * nephika * shoka kukududuzela phezulu in newsfeed lwabo! Iindaba ezimnandi kukuba kukho ezinye iindlela ezinkulu ukondla ukuswela kwenu ubomi kunye nenqanaba tsiba uncedo ngaphandle kungaphazanyiswa ezo abahlobo ubuncwane!
Fumana obambisene nabo! Liphoseni phandle iwonga Facebook ubiza bonke abahlobo abadlala Papa Pear ukukhwaza phandle likwazise, Ndiyayazi app lidla ukuba enze izintlu zabantu umdlalo (nokuba ngubani na into ecinga ukuba badlale) kodwa ezi cant ngokwenene kuba wathembela, ingakumbi xa umntu ayikho kakhulu lobuchwepheshe, kusenokwenzeka ukuba egunyazisiweyo umdlalo ngephutha ukuzama ukuqonda ukuba yintoni na. Uza kuphelisa ingxoxo kanye nabo bonke nge status, uya kufumanisa ukuba odlala kunye neemfuno ubomi nje embi njengoko, ngubani uyavelana yaye ukulungele ukunceda (ngababaxi ngokuqhelekileyo farmville!) nokuba ngubani ngempela akanandaba, ezifana, okanye ukuma izicelo umdlalo…Yep zibe indlela yokwenza abantu bazi, AKUDLI kakhulu!
Xa uyazi ukuba ngubani yakho 'oyinyaniso’ abahlobo ukuba uqale ngokwenza uluhlu smart, ukudala oku izicwangciso zakho zangasese kwaye udibanise abantu ngokucofa 'Mhlobo’ oku kuya kukunika ukhetho ukucima okanye 'uluhlu Hlela Friends', faka oku ukubongeza kuluhlu lwakho smart! ke into balo yokukhetha nje olu khetho xa ekuthumeleni Facebook (umphakathi, abahlobo, omaziyo okanye nabadlala!)
Ungadibanisa amanye random Papa Pear fans ngokuphepha nge ukuphelisa ufikelelo lwabo kulwazi lwakho, byi ukuhlola izicwangciso zakho zangasese rhoqo kunjalo!
Ukuzothi ga ngoku uya kuba kakuhle ngendlela yakho ekusekeni ifomu eliphakathi Papa elungileyo, kuthatha ixesha ukuze siqhelane kwi ukulawula indlela Papa Ngamapere kodwa
Papa Pear Saga Amacebo, tips and tricks
Wonke umntu uyamthanda ilungelo elungileyo Saga? Kwaye Papa Pear ayikho
Papa Pear Saga – amanqanaba 1-7, isingeniso.
Wamkelekile ukuya kwinqanaba lokuqala ngohambo lwakho Papa Pear, okanye njengoko neyaziwa 'i elinuka Forest' yayo. Njenge imidlalo ezininzi kwinqanaba lokuqala simiselwe ekwaziseni ukuba zonke izinto ezahlukeneyo umdlalo has ukunikela, kunye developers e King baba ziingcali lwam uluvo kule! Zakwazi ukuba babonise kancinane yonke into ofuna ukuyazi ngendlela yadika wena kamnandi!
level 1 kwaye sihlangana Papa Pear, imbewu hit abangatshatanga kunye neminqathe ngonaphakade emnandi! Kwaye sifumanisa ukuba unokuba kuphela Ngamapere ezintathu ebhodini ngaxeshanye njengoko sizama ukwenza ibango ubuncinane 10 000 iingongoma.
level 2 Ukuhlanganiswa up ezinye amaqunube kunye imbewu yaye siyaqonda ukuba ezi zigqeba zizithathela ezintathu hits ukususa, uyakwazi ukubona ukuba uphi na ngombala wazo kulo mjikelo. Kwakhona eli zinga malunga nokufunda kunye nezibophelelo zemithi njengoko sijolise ubuncinane 15 000.
level 3 kuzisa nalo Ezinye chilis kushushu kwaye iindaba zimnandi njengoko sizama sijolise ehloniphekile kakhulu 18 000 okanye ngaphezulu. Lo mgangatho ubonisa kutheni akusoloko bubulumko ukungalisusi zonke izikhonkwane zakho iikherothi ekuqaleni, ile maleko emazantsi kakhulu ngokukhawuleza kwaye kuya kufuneka nto bounce off.
level 4 isenza sikwazi ukuhlangabezana squishies super blueberry cute asemaphakadeni Ukugunda. Ezi beediliya ingqongwe izikhonkwane blue na ngumnyhadala esisigxina yebhodi, azikwazi ukuba ezisusiweyo yaye badlale indima luncedo ngokongeza ebuyile eyongezelelweyo kwi yakho Papa Ngamapere, ufunde ukuyisebenzisa ngobulumko njengoko sijolise ukuqokelela 15 000 iingongoma!
Papa Pear Izikhonkwane – Nangu booster Special
Ezinye Papa Izikhonkwane kwintshukumo!
Papa Pear booster nezikhonkwane aba elingana abantu endandinomdla Candy’ epha ezizodwa kunye nendibaniselwano super. Get yakho Papa Pear waphoswa emhlabeni ibhodi nje ngendlela efanelekileyo kwaye avuzwa ngokufanelekileyo nomnye izikhonkwane ezizodwa amahlanu ukuba ngamnye abe ezabo incasa ayikho kukulunga! Xa phezu izikhonkwane ibhodi kufuneka watshayiswa Papa Pear ukuba isebenze, ngokuxhomekeke yesenzo isikhonkwane i Pear ke
Filed Under: Papa Pear Saga Tagged With: zikwenze, Papa Pear Saga, Pope izikhonkwane
King ekwenzile kwakhona! Baye bakwazi ukukhulula enye umdlalo terrifyingly iziyobisi yaye siyakhuthaza yagqampa yaya ngqo embindini bahlekisa zobuchopho kwaye izisa nzulu psyche yakho! ..Well uhlobo, of kodwa hayi ngendlela ingumnqa!
Ifumaneka kuzo zonke izixhobo ezinkulu
Imfihlo & Cookies Policy